Lenovo Pentium Laptop အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
Lenovo Pentium Laptop
#Photoshop. ရုံးသုံး၊ ကျောင်းသုံး အဆင်ပြေမယ်.. အလုံးလေးလဲသန့်မယ်
#CPU. Pentium သုံးရတာ သွက်ပါတယ်
#Graphic. Intel HD 1.8GB ထွက်တယ်နော်
အမည်: Lenovo Pentium Laptop